Utu Pi 400, RPi a kiiboodu | Site na Linux
Pi Pi Pi 400, RPi yiri keyboard
Ulo akwukwo Raspberry Pi kwuputara nke ohuru kọmpat kọmputa Utu Pi 400, emeputara dika monoblock ya na keyboard.
Ọzọkwa, ihe na-adọrọ mmasị banyere ngwaọrụ ọhụrụ a site na ntọala Raspberry bụ ụdị ihe nke Raspberry Pi 400 ozugbo na-echetara kọmputa mbụ.
Banyere Rasberi Pi 400
Kọmputa Ọ dabere na ụdị gbanwere nke mbadamba Pi 4, eji 4 GB nke Ram. Na mgbakwunye na ụdị ihe dị iche iche nke bọọdụ ọhụrụ ahụ, isi ihe dị iche na bọọdụ Raspberry Pi 4 ewepụtara na mbụ bụ mmụba nke ugboro CPU site na 1,5Ghz na 1,8Ghz.
Ugboro ugboro mụbara n'ihi mmejuputa usoro iwepụ ọkụ na-adabere na nnukwu efere efere nke e ji keyboard rụọ.
N'azụ igbe ahụ, e nwere njikọta: 40-pin GPIO, ọdụdụ micro-HDMI abụọ, otu oghereura maka kaadị MicroSD, ọdụdụ USB 3.0 abụọ na ọdụ ụgbọ USB 2.0.
Iji jikọọ na netwọk ahụ, a na-enye Gigabit Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri, nkwado maka nkwukọrịta ikuku (802.11b / g / n / ac 2.4GHz na 5GHz) na Bluetooth 5.0.
Rasberi Pi abụwo ụlọ ọrụ PC. N'ike mmụọ nsọ nke kọmputa kọmputa nke 1980s, ebumnuche anyị bụ itinye kọmpụta dị elu, ọnụ, komputa mmemme n'aka ndị mmadụ gburugburu ụwa. Na nke sitere na PC ndị a kpochara, lee ya Utu Pi 400 - Kọmputa zuru ezu nkeonwe, wuru n'ime kọmpat keyboard.
Sistemu eji arụ ọrụ na-arụnyere na nkesa Raspberry Pi OS (Raspbian) dabere na ntọala nke ngwugwu Debian 10 "Buster". Nhọrọ, a na-enye mbipụta Ubuntu maka ntinye.
N'aka dị n'elu, Raspberry Pi 400 dị iche. Dị Raspberry Pi 400 na-eme ka anyị cheta kọmputa ndị mbụ dị ka ndị nke BBC Micro ma ọ bụ ZX ụdịdị dị iche iche.
Dabere na mpaghara zụọ ahịa, komputa ejikọtara ya na igodo keyboard 78 ma ọ bụ 79 Yiri na imewe ka ọtụtụ kọmpụta kọmpụta kọmpat.
Na mbido, enwere igodo isii di iche: United Kingdom, United States, Germany, France, Italy na Spain. Companylọ ọrụ ahụ na-akọ na ụdị dị iche iche ga-adị n'oge na-adịghị anya maka ahịa Norwegian, Swedish, Danish, Portuguese na Japanese.
Karịsịa, ịnwe ihe ole na ole na desktọọpụ gị na-eme ka ntọala ntọala dị mfe. Kọntaktị ụlọ kọmpụta (BBC Micros, ZX Spectrums, Commodore Amigas na ndị ọzọ) jikọtara motherboard ozugbo na keyboard. Enweghị igbe dị iche na nke usoro; enweghị eriri USB. Naanị kọmputa, ike ọkọnọ, eriri nyocha, na (mgbe ụfọdụ) oke.
O nwetụbeghị mgbe ihere mere anyị ịgbaziri ezigbo echiche. Kedu nke na-ewetara anyị Raspberry Pi 400: ọ bụ 4GB Raspi Pi 4 ọzọ ngwa ngwa y dị jụụ , etinyere na kọmpat keyboard.
N'ikwu okwu n'ozuzu, a ga-akpali mmụọ ahụ site na otu PC na-emepụta Acorn Computers jiri keyboard ya dị iche iche dị ka ihe ndabere maka ya.
Banyere nkọwa nke Raspberry Pi 400:
Broadcom BCM2711 SoC: isi 8-bit ARMv72 Cortex-A64 cores na-agba ọsọ na 1.8GHz na VideoCore VI eserese eserese na-akwado OpenGL
ES 3.0 ma nwee ike idozi H.265 vidiyo na 4Kp60 mma (ma ọ bụ 4Kp30 na nlele abụọ).
4GB LPDDR4-3200 Ram.
IEEE 802.11b / g / n / ac wireless LAN, dakọtara na 2.4GHz na 5GHz.
Bluetooth 5.0, UGO.
2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0.
2 × micro HDMI (4Kp60).
79 bọtịnụ bọtịnụ (nhazi maka Bekee, French, Italian, German na Spanish).
Onyinye ike 5V site na USB-C.
Ọnọdụ okpomọkụ dị na-arụ ọrụ: 0 Celsius C ka + 50 Celsius C.
Akụkụ 286 × 122 × 23 mm.
N'ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere nke a ngwaọrụ ọhụrụ ulo oru site na utu ntọala, ị nwere ike ịlele nkọwa na mbụ post na njikọ na-esonụ, ebe ị nwekwara ike ịchọta ozi banyere otu esi enweta ya ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ya.
Naanị igwe na-efu $ 70. Ihe ngwugwu nke gunyere oke, ike onodu, kaadi microSD, eriri HDMI na ntuziaka onye mbido dị maka $ 100.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Pi Pi Pi 400, RPi yiri keyboard
Olu, euro, paụnd, pesos?
Zaghachi ka ọkụ
Ulauncher na Synapse: 2 Ezigbo ihe ntinye nke ngwa maka Linux
Pyston 2 mmejuputa Python na JIT compiler